प्रत्येक प्रश्नको जवाफ हेर्न वा लुकाउन क्लिक गर्नुहोस्।
Q. कुन सेवाहरूले मलाई वा मेरो परिवारको सदस्यलाई मद्दत गर्नेछ भनेर मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
A. प्रारम्भिक फोन कलले हामीलाई सेवाहरूको लागि तपाईंको आवश्यकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्न अनुमति दिनेछ। हामी तपाईंलाई निःशुल्क जानकारी प्रदान गर्न सक्छौं र सेवाहरूको लागि आवेदन दिन वा तत्काल ध्यान प्राप्त गर्ने बारे कसरी जान्ने भनेर व्याख्या गर्न सक्छौं।
Q. गेटवे सामुदायिक सेवाहरूबाट सेवाहरू प्राप्त गर्नको लागि के मलाई अर्को एजेन्सी वा चिकित्सकद्वारा रेफर गर्न आवश्यक छ?
A. होइन। केही व्यक्तिहरूलाई स्थानीय सामुदायिक एजेन्सीहरूले रेफर गर्छन्, तर धेरै मानिसहरूले फोन उठाउँछन् र आफैं कल गर्छन्।
Q. सेवाहरूको लागत कति हुनेछ?
A. गेटवेले प्रदान गर्ने धेरै सेवाहरू Medicaid र अन्य बीमाहरू स्वीकार गर्छन्। सेवाको लागत वहन गर्न नसक्ने र पर्याप्त बीमा कभरेज नभएका व्यक्तिहरूले आय स्तर अनुसार सेट गरिएको स्व-भुक्तानी शुल्कको व्यवस्था गर्न सक्छन्। गेटवे सामुदायिक सेवाहरूले भुक्तानी गर्न असमर्थताको आधारमा कसैलाई सेवाहरू अस्वीकार गर्दैन। हामी एक निजी, गैर-नाफा संस्था हो।
प्र. मेरो परिवारका सदस्य(हरू) वा म आफैले सेवाहरू प्राप्त गर्न सुरु गर्न कति समय लाग्नेछ?
A. सेवाहरूको लागि योग्य आपतकालीन आवश्यकता भएका व्यक्तिहरूलाई तुरून्त सेवा दिन सकिन्छ। कम आकस्मिक आवश्यकता भएका मानिसहरूलाई तिनीहरूको सेवाको आवश्यकताको स्तरको आधारमा मूल्याङ्कन र अनुगमनको लागि निर्धारित गरिन्छ। त्यहाँ केही सेवाहरूको लागि प्रतीक्षा सूचीहरू छन् जुन नयाँ व्यक्तिहरूलाई सेवा दिन सुरु गर्न आवश्यक कोष प्राप्त गर्न गेटवे सामुदायिक सेवाहरूमा निर्भर छन्।
Q. के म गोप्य रूपमा सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छु? के मैले आफ्नो वा मेरो परिवारको बारेमा उपलब्ध गराएको जानकारी सुरक्षित हुनेछ?
A. गेटवेले तपाइँ र/वा तपाइँको परिवारको सदस्यलाई तपाइँले प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि सेवा वा तपाइँले प्रदान गर्न सक्ने जानकारीको सम्बन्धमा पूर्ण गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। प्रारम्भिक कागजी कार्य पूरा भएपछि यसको कुनै पनि अपवाद इनटेक प्रक्रियाको क्रममा व्याख्या गरिन्छ। त्यस समयमा, तपाईंलाई पूर्ण रूपमा सूचित गरिनेछ र कुनै पनि बीमा कम्पनी वा तपाईंले निश्चित जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुभएको कुनै अन्य पक्षलाई तपाईंको वा तपाईंको परिवारको सदस्यको बारेमा जानकारी जारी गर्नको लागि हामीलाई तपाईंको लिखित सहमति प्रदान गर्न आवश्यक हुनेछ।
Q. सेवाहरू प्रदान गर्ने गेटवे कर्मचारीहरूको योग्यता के हो?
A. हाम्रा सबै कर्मचारीहरूले गेटवेद्वारा भाडामा लिनु अघि विस्तृत जाँच र सन्दर्भ जाँच प्रक्रियाबाट गुज्रिन्छन्। साथै, धेरै कर्मचारी पदहरूलाई हाई स्कूल भन्दा बाहिर औपचारिक शिक्षा चाहिन्छ जस्तै स्नातक र मास्टर डिग्री। थप रूपमा, हाम्रा बाहिरी रोगी मानसिक स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले दक्षता स्तरहरू बढाउनको लागि प्रमाणपत्रहरू र इजाजतपत्रहरू जस्ता विभिन्न प्रमाणहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छ। निरन्तर शिक्षा र प्रशिक्षण गेटवे कर्मचारीहरूको लागि प्राथमिकता हो।
Q. यदि मसँग आवश्यकताहरू छन् जुन यसले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन भने के गेटवेले मलाई मद्दतको अन्य स्रोतहरूमा सन्दर्भ गर्न सक्छ?
A. हो। Gateways Community Services ले दक्षिणी न्यू ह्याम्पशायरमा व्यक्ति र परिवारलाई गुणस्तरीय हेरचाह उपलब्ध गराउने प्रयास गर्ने अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूसँग नजिकको काम गर्ने सम्बन्धको फराकिलो नेटवर्क कायम गर्दछ।
प्र. तपाईं अपाङ्गतालाई के मान्नुहुन्छ?
A. हामी साना बच्चाहरूलाई जन्मदेखि तीन वर्षसम्म सेवा गर्छौं जसको विकासमा ढिलाइ वा विकासात्मक असक्षमता छ।
हामी विकासात्मक असक्षमता, मस्तिष्कको चोट र दीर्घकालीन स्वास्थ्य अवस्था भएका बालबालिका र वयस्कहरूलाई सेवा गर्छौं।
यदि तपाइँसँग योग्यताको बारेमा प्रश्नहरू छन् भने कृपया हाम्रो सेवन विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।